Node.js bilaash ah oo martigelinaya Heroku > Vielhuber David
Node.js bilaash ah oo martigelinaya Heroku09
Marti gelinta Node.js wali ma ahan mid aad u baahsan, gaar ahaan wadamada ku hadla Jarmalka. Shirkadda daruuraha Mareykanka ee Heroku waxay halkan ku bixisaa xal - iyo xitaa lacag la'aan . Waxaad had iyo jeer aragtaa muuqaalka "Dhis barnaamijyada ... maaha kaabayaasha" welina si dhib yar looma hayo xaddidaadyo Tusaale ahaan, waxaan hirgelineynaa shaqo yar oo qarsoodi ah oo ku saleysan PhantomJS , oo xoqeysa degel maalin kasta kuna dir cinwaanka bogga emayl.
Si tan loo sameeyo, waxaan marka hore iska diiwaangelinnaa bilaash ahaan https://signup.heroku.com/:
Kadib xaqiijinta e-maylka qasabka ah, waxaan ku wareejin doonaa lambar sir ah oo aamin ah:
Si aan awood ugu yeelano in aan mar dambe ku isticmaalno lacag-darrooyinka Suuqa, waa inaan marka hore hubinnaa koontadeena hoosta https://heroku.com/verify adoo galaya kaarka deynta (ha walwelin, wax walba waa bilaash):
Inta soo hartay hadda waxay ku dhacdaa si gaar ah khadka taliska. Tan waxaan ugu baahan nahay degaanka Node.js / npm , Git iyo Heroku CLI .
Waxaan ugu dambeyntii galnay Heroku maxalliga ah (hal mar) khadka taliska:
Marka hore waxaan abuureynaa barnaamij cusub oo ku saleysan boorso ku habboon. Tusaalaheena waxaan u isticmaaleynaa rasmiga ah Node.js buildpack heroku-buildpack-nodejs.git:
Hadda waxaan abuurnay xirmo.json si loo rakibo xirmooyinka PhantomJS , CasperJS , SpookyJS iyo Nodemailer ee looga baahan yahay mashruuceenna:
Caqliga dhabta ah waxaa laga heli karaa script.js:
Waxaan marka hore tijaabinaynaa wax kasta oo maxalli ah:
Qoraalku wuxuu cinwaan ka soo saarayaa degel wuxuuna dirayaa emayl:
Waxaan hadda ku riixeynaa wax walba Heroku, oo sidoo kale kiciya geedi socodka dhismaha:
Haddii aad rabto inaad ku riixdo isbeddelada furaha ee Heroku goor dambe, si fudud ayaad mar labaad u riixaysaa. Dhinaca kale, waxaan hadda ka hubin karnaa SSH haddii wax walba ay ku shaqeynayaan serverka:
Halkan, sidoo kale, emaylka ayaa si sax ah loo soo diray. Hadda waa inaan si otomaatig ah u socodsiino hawsha:
Waxaan ku darnaa wicitaan qoraal cusub "Ku dar shaqo cusub":
Imtixaan ahaan, waxaan u doorannaa 10-kii daqiiqaba mar sida soo noqnoqoshada oo aan keydinno:
Cronjob wuxuu hadda si toos ah u qaban doonaa shaqadiisa mustaqbalka.